people Nepal » के–के कारणले छाती दुख्न सक्छ ? के–के कारणले छाती दुख्न सक्छ ? – people Nepal
के–के कारणले छाती दुख्न सक्छ ?
Posted on July 1, 2017 by Purna Nanda Joshi
डा. ओम मूर्ति अनिल, मुटुरोग विशेषज्ञ
मुटु रोगको कारणले नै सँधै छाती दुख्छ भन्ने धारणा गलत हो । किनभने लगभग ९० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसमा छाती दुख्ने कारण मुटुसंग सम्बन्धित हुँदैनन् । छाती दुख्नसाथआत्तिएर अस्पतालजानु जरुरी हुँदैन । पहिलादुखाईको बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ, अनिमात्र को साग, कहाँ र कहिले जँचाउने हो, सो को बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ । दुखाईको प्रकृति मुटुरोगसँग सम्बन्धित भएको शंका भएमा अस्पताल गइ हाल्नुपर्छ । यति ह्दयाघातको कारणले छाती दुखेको हो भने, १ मिनेट पनि समय खेर फाल्नु हुँदैन । तर दुखाई मुटुसंग सम्बन्धित नभएपनि योजना बनाएर चिकित्सकलाई भेट्नु पर्छ ।